Children ' s hospita - Engelska - Burmesiska Översättning och exempel
You searched for: children ' s hospital and health center (Engelska - Burmesiska)
လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှင့် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ကြည့်ပါ
အကြောင်းမူကား၊ ထိုတရားစကားကို တွေ့ရ သောသူတို့သည် အသက်ရှင်ခြင်း၊ တကိုယ်လုံးကျန်းမာ ခြင်းအကြောင်းကို တွေ့ရပြီ။
သာယာသောစကားတို့သည် ပျားလပို့ကဲ့သို့ ဖြစ်၍၊ စိတ်ဝိညာဉ်၌ ချိုမြိန်လျက်၊ ကိုယ်အရိုးကို ကျန်းမာ စေလျက်ရှိကြ၏။
the hierarchy of hazard controls isaframework widely used in occupational safety and health to group hazard controls by effectiveness.
အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်သည် ထိရောက်မှုအလိုက် အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်နည်းများကို အုပ်စုခွဲရန် လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးတို့တွင် ကျယ်ပြန်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိသည့် မူဘောင် ဖြစ်သည်။
the supply chain must continue, and californians must have access to such necessities as food, prescriptions, and health care.
ထောက်ပံ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် နေထိုင်သူများအနေဖြင့် အစားအစာ၊ သောက်သုံးရန်ဆေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုများ အပါအဝင် မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များကို ရရှိ အသုံးပြုနိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
serology can provide important information about background population immunity, and sentinel networks can provideamechanism for systematic data collection and linkage to medical records and health outcomes.
သွေးရည်ကြည် လေ့လာမှုက လူအများ၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်အကြောင်း အချက်အလက်များ ဖော်ပြပြီး ကင်းစောင့် ကွန်ရက်များက စနစ်ကျသော ဒေတာ စုဆောင်းမှုနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းများအပြင် ကျန်းမာရေး ရလဒ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအတွက် နည်းစနစ်တစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
according to the u.s. occupational safety and health administration (osha), lower exposure risk jobs have minimal occupational contact with the public and other coworkers.
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု (osha) အဆိုအရ ထိတွေ့မှု ဘေးအန္တရာယ် နည်းပါးသော အလုပ်များသည် လူထုနှင့် အခြား လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့မှု အနည်းဆုံးသာ ရှိသည်။
safetrace utilizes secure hardware technologies to allow users to share sensitive location and health data with other users and officials, without compromising the privacy of that data.
safetrace သည် အသုံးပြုသူများကို ဒေတာများ၏ ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု ထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ အရေးကြီးသော တည်နေရာအချက်အလက်နှင့် ကျန်းမာရေး ဒေတာများကို အခြား သုံးစွဲသူများနှင့် အရာရှိများထံ မျှဝေနိုင်ရန် လုံခြုံစိတ်ချရသော ဟာ့ဒ်ဝဲ နည်းပညာများကို အသုံးပြုနေသည်။
အသင့်တော်ဆုံး သက်သာစေရေး မူဝါဒများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လိုအပ်ချက်ကို အမြင့်ဆုံးအဖြစ် 2/3 အထိနှင့် သေဆုံးမှုများကို ထက်ဝက် လျှော့ချပေးနိုင်သော်လည်း သေဆုံးမှုပေါင်း ရာထောင်ချီ ဖြစ်လျက်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးစနစ်များမှာလည်း အခက်တွေ့နေရပါသည်။
however, on 12 may 2013,acase of human-to-human transmission in france was confirmed by the french ministry of social affairs and health.
သို့ရာတွင် 2013 ခုနှစ်မေလ 12 ရက်‌နေ့၌ ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် လူအချင်းချင်း ကူးစက်မှု တစ်ခုကို ပြင်သစ် လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနက အတည်ပြုခဲ့သည်။
since cases have so far clustered in certain regions in eu/eea countries and the uk, and hospitals and intensive care units usually serveadefined regional catchment population, information about cases and intensive care beds should preferably be made available at the nomenclature of territorial units for statistics2(nuts-2) level.
ရောဂါသည် eu/eea နိုင်ငံများနှင့် uk တို့ရှိ အချို့ဒေသများအတွင်း စုဝေးပျံ့နှံ့နေပြီး ဆေးရုံနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်တို့တွင် ပုံမှန်အားဖြင့် သတ်မှတ်ဒေသတွင်းလူဦးရေကိုသာ ကုသနိုင်သည်ဖြစ်ရာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ကုတင်အရေအတွက်တို့ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်အတွက် ဒေသပိုင် ဌာနများ အမည်ပေးစနစ် အဆင့်2(nuts-2) ဖြင့်ရရှိနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးထားသင့်သည်။
based on the experience from italy, countries, hospitals and intensive care units should increase their preparedness forasurge of patients with covid-19 who will require healthcare, and in particular intensive care.
အီတလီနိုင်ငံမှ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံ၍ နိုင်ငံများ၊ ဆေးရုံများနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသရေးဌာနများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သော၊ အထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သော covid-19 ကူးစက်ခံထားရသည့် လူနာများ တစ်ဟုန်ထိုးတိုးတက်လာနိုင်မှုအတွက် သူတို့၏ အသင့်ဖြစ်မှုကို တိုးမြှင့်ထားသင့်သည်။
the maximum gathering size recommended by us government bodies and health organizations was swiftly reduced from 250 people (if there was no known covid-19 spread inaregion) to 50 people, and later to 10 people.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြံပြုထားသည့် အများဆုံး လူစုလူဝေးပြုလုပ်နိုင်သော အရေအတွက် 250 ဦး (ဒေသတွင်း covid-19 ပျံ့နှံ့မှု မရှိသေးလျှင်) ကို 50 ဦးအထိ လျင်မြန်စွာ လျှော့ချခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် 10 ဦးအထိ လျှော့ချခဲ့သည်။
early march 2020, doctors in the affected regions of italy describedasituation in which ca 10% of patients with covid-19 required intensive care and media sources reported that hospitals and intensive care units in these regions had already reached their maximum capacity.
2020 ပြည့်နှစ်မတ်လအစောပိုင်းတွင် အီတလီနိုင်ငံ၊ ကူးစက်ခံဒေသများမှ ဆရာဝန်များက covid-19 ကူးစက်မှုခံရသော လူနာ 10 % ခန့်သည် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှု လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး မီဒီယာရင်းမြစ်များက အဆိုပါဒေသများရှိ ဆေးရုံများနှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသရေးဌာနများသည် ၎င်းတို့၏ လူနာ လက်ခံနိုင်သော ပမာဏ အမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
data on admission of covid-19 cases inahospital and/or an intensive care unit are currently available at eu/eea level for only 6% and 1% cases, respectively (data not shown).
ဥရောပသမဂ္ဂ (eu)/ဥရောပ စီးပွားရေး ဒေသ (eea) အဆင့်တွင် ဆေးရုံ နှင့်/သို့ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်များ၌ တက်ရောက်ကုသနေသော covid-19 ရောဂါလူနာဦးရေ အချက်အလက်များ၏ 6% နှင့် 1% ကိုသာ အသီးသီး ရရှိနိုင်သည် (အချက်အလက်ကို ဖော်ပြမထားပါ)။
ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်း စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုများကို covid-19 စစ်ဆေးမှုအတွက် အာရုံစိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် မဲပေးမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ covid-19 အတည်ပြုလူနာများကို သီးသန့်ထားခြင်းနှင့် သီးခြားခွဲထားခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများကို လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် အထူးကြပ်မတ် စောင့်ရှောက်မှုစွမ်းရည်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲနိုင်သည့် အရေးပေါ် အသက်ရှူစက်များနှင့် ကုတင် အရေအတွက် တိုးမြှင့်ခြင်းများ အပါအဝင် အဆင့်များစွာတွင် အရင်းအမြစ်များပြောင်းလဲရန် ဆေးရုံများနှင့် အ​ခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို who ၏ ဥရောပဒေသဆိုင်ရာရုံးနှင့် ecdc တို့က ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
according to the u.s. occupational safety and health administration (osha), lower exposure risk jobs have minimal occupational contact with the public and other coworkers, for which basic infection prevention measures are recommended, including hand washing, encouraging workers to stay home if they are sick, respiratory etiquette, and maintaining routine cleaning and disinfecting of the work environment.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု လုပ်ငန်းခွင် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှုဌာန (osha) ၏ အဆိုအရ လူအများနှင့်၊ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တို့နှင့် အလုပ်သဘောအရ အနည်းငယ်မျှသာ ထိတွေ့ရသည့်အလုပ်များသည် ကူးစက်မှုအန္တရာယ် နည်းပါးသော အလုပ်များဖြစ်ပြီး ထိုကဲ့သို့အလုပ်များအတွက် လက်ဆေးခြင်း၊ အလုပ်သမားများ နေမကောင်းလျှင် အိမ်တွင်သာနေရန် တိုက်တွန်းခြင်း၊ နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်စေခြင်းနှင့် အလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အား ပုံမှန် သန့်ရှင်း၍ ပိုးသတ်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်း အပါအဝင် အခြေခံ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ရေး စီမံဆောင်ရွက်ချက်များကို အကြံပြုထားပါသည်။
countries, hospitals and intensive care units should thus prepare themselves forascenario of sustained community transmission of sars-cov-2 and an increase in the number of patients with covid-19 requiring healthcare, and in particular intensive care, such as the one occurring in the affected regions of italy.
သို့ဖြစ်၍ နိုင်ငံများ၊ ဆေးရုံများနှင့် အထူးကြပ်မတ် ကုသဆောင်များသည် ဒေသတွင်း sars-cov-2 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် အီတလီနိုင်ငံရှိ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဒဏ် ခံစားနေရသည့် ဒေသများတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဖြစ်ရပ်များကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အထူးသဖြင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်သည့် covid-19 လူနာအရေအတွက် မြင့်တက်လာခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ လုပ်ဆောင်ထားသင့်သည်။
among 122,653 u.s. covid-19 cases reported to cdc as of march 28, 2020, 7,162 (5.8%) patients had data available pertaining to underlying health conditions or potential risk factors; among these patients, higher percentages of patients with underlying conditions were admitted to the hospital and to an icu than patients without reported underlying conditions.
2020 ခုနှစ်၊ မတ်လ 28 ရက်တွင် cdc ထံသတင်းပို့ထားသော u.s. covid-19 ဖြစ်စဉ် 122,653 တွင်၊ လူနာ 7,162 (5.8%) သည်ရောဂါအခံများ သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်ရှိသည့်အချက်များတွင် သက်ဆိုင်နေသည့်ဒေတာများကို ရရှိခဲ့ပါသည်၊ ထိုလူနာများတွင်၊ ရောဂါအခံများနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းပို့မထားသောလူနာများထက် ရောဂါအခံများရှိနေသည့် လူနာများ၏ ပိုမိုမြင့်မားသောရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးရုံနှင့် icu တွင် ရောက်ရှိနေပါသည်။
bahasa english my mother (Engelska>Malajiska)քղանցքներին (Armeniska>Engelska)durchstechsicheren (Tyska>Grekiska)nenek (Indonesiska>Japanska)are you insulting me (Engelska>Tagalog)enrasar (Spanska>Italienska)fan (Engelska>Malajiska)soul to soul (Engelska>Swahili)needashoulder to lean on (Engelska>Tagalog)ikisinin (Turkiska>Tjeckiska)바꾸기 (Koreanska>Nepali)contoh karangan bi ketika berkelah di tepi pantai (Malajiska>Engelska)velocipede (Engelska>Finska)pahalagahan (Tagalog>Engelska)i really miss you (Tagalog>Engelska)ve ghar jate hai (Hindi>Engelska)venga ahmad te busco un trabajo y me pagas los 80 (Spanska>Arabiska)stresas (Litauiska>Engelska)essay ekti rajpather atmakatha (Engelska>Bengaliska)sepanjang pengetahuan saya (Malajiska>Engelska)tum chudi hui ho (Hindi>Engelska)what do you do (Engelska>Bengaliska)苗乐文 (Kinesiska (förenklad)>Engelska)aapse mai thak chuka hun (Hindi>Engelska)इंग्लिश सेकस (Hindi>Engelska)